» प्रविधिमा बाल–पहुँच कति फाइदा कति बेफाइदा ?
प्रविधिमा बाल–पहुँच कति फाइदा कति बेफाइदा ?
२ माघ २०७५, बुधबार १९:३६
मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, भिडियो गेमजस्ता प्रविधिजन्य उपकरणले विद्यार्थीको पढाइ बिगार्छ भन्ने गलत धारणा जनमानसमा व्याप्त भएको उनले बताए । बालबालिकाको ज्ञान, सीप र प्रयोगको दायरा फराकिलो पार्नमा विद्युतीय माध्यमको ठूलो भूमिका हुने घिमिरेको बुझाइ छ । उमेरअनुसार के सिक्ने भन्ने कुरा पाठ्यक्रममा उल्लेख गर्नुपर्ने र प्रयोगको सन्दर्भमा शिक्षक तथा अभिभावक चनाखो बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रविधिमा बालबालिकाको सहज पहुँचसम्बन्धी यो मत सर्वेक्षणले के कुराको पुष्टि हुन्छ भने प्रविधिका नकारात्मक पक्ष मात्र नभई सकारात्मक पक्षसमेत छन् । सदुपयोग गर्न सके प्रविधि नयाँ नयाँ सिकाइका लागि सहयोगी हुन्छ भने दुरुपयोग गर्दा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अहितकर हुन्छ । बालबालिकालाई गाइड लाइन नदिई प्रविधिको प्रयोग गर्न दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने सही मार्गदर्शन गरेर चलाउन दिँदा यो उपलब्धिमूलक हुन्छ । त्यसैले अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाले प्रविधिको प्रयोग कसरी र कति मात्रामा गरेका छन् भन्ने कुरा ख्याल गरी उनीहरूलाई सही मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी जानकारीलाई समावेश गर्ने र जीवनोपयोगी सामग्रीबारे जानकारी दिने हो भने बालबालिकालाई नयाँ-नयाँ सिकाइमा समेत सहयोगी हुने देखिन्छ ।